Nhau - chii musiyano wekutakura chisimbiso uye nesimbi guruva chifukidziro?
Musiyano wekutakura chisimbiso uye simbi chivharo
- Kutakura chisimbiso mhete ndeyekusimbisa kwayo kuita uye hupenyu hwebasa rine kukosha kwakakosha.
- Kutakura chifukidziro cheguruva ndiko kudzivirira kuburitsa muguruva uye mamwe marara izvo zvinokanganisa basa.
akatakura rakavhara mhete chakagadzirwa rabha. Mashoko acho akatakura dustproof butiro ipfupi simbi yairema.
Iyo chivharo cheguruva chivakwa chegore, chinowanzo simbiswa kubva kune rakatetepa jira resimbi, iro rakasungirirwa kune imwe ringi kana Washer yekutakura uye inosvika kune imwe mhete kana Washer, ichivhara nzvimbo yemukati yekutakura usingataure iyo imwe mhete kana Washer.
Imwe ndeye guruva-chiratidzo, imwe yacho haina mweya. Guruva Kudzivirira ndiko kudzivirira guruva mukati memotokari mukati; chisimbiso kwete chete guruva rekunze risingakwanise kupinda uye iro remukati girisi harisi nyore kuyerera kubuda. Iyo grease isina kuchena kunze haisi nyore kuyerera ichipinda.
Mukuita musiyano uripo pakati pezviviri hauna kunyanya kukura. Mabheyari anowanzo mukati nekunze kwekapu yemafuta, atamba basa iri, chete mune chaiwo mamiriro anodiwa chete. Z yekusavhara guruva uye S yechisimbiso (FS yeinonzwa mhete chisimbiso uye LS yerabha chisimbiso).